I-Apple Pioneer Place ePortland Ivula Izinyanga eziyi-9 Kamuva | Ngivela kwa-mac
Ubhadane lweCoronavirus olwaqala ngoMashi 2020 kwabukeka sengathi luzohlala ngaphansi kokuhlala isikhathi eside nokuthi yini esele. Kubangela ukufa kwabantu abayizigidi kanye nokulahleka kwezomnotho okuyizigidigidi emhlabeni jikelele. Yize i-Apple ingathintekanga kakhulu, izwile ngemiphumela. Kudingeke ukuthi ivalwe ama-Apple Stores amaningi (amanye awo asavaliwe umphakathi) futhi wonke anemikhawulo yamandla. Amaningi avule futhi enye ekugcineni eyenzayo yi-Apple Pioneer Place ePortland ngemuva kwezinyanga eziyi-9.
La I-Apple Pioneer Indawo ePortland Cishe yisitolo se-Apple esivaliwe isikhathi eside kakhulu. Ukuvalwa kwalo kwenzeke ekuqaleni kobhubhane ukuze likwazi ukunciphisa izifo ezithathelwanayo phakathi kwezakhamizi zedolobha. Ukusuka lapho, kube nokuhlukumezeka okungapheli okuvimbele i-Apple Store ukuthi ibuyele ekusebenzeni okujwayelekile. Kuhle ngokujwayelekile kwamanje njengoba kungenalutho olujwayelekile, kepha okungenani kuvulekile. Izindlela zokuphepha ziyasebenza. Uyazi, ibanga, ijeli nemaski kanye nokubhuka isikhathi.
Izolo, NgoMsombuluko, Februwari 22 ngo-11: 00 ekuseni Futhi ngemuva kwezinsuku ezingama-267, iminyango ye-Apple Pioneer Place ePortland isivele ivulekile. Imicimbi embalwa igcine isitolo sivalwe okuningi kwe-2019, 2020, ne-2021 kuze kube manje. Yize isivaliwe kumakhasimende, isitolo sibuyekezwa ngokuqhubekayo futhi sisetshenziselwe ukusebenza ekusithekeni.
Ukulungiswa okukhulu kwenziwe ku-facade, ngomonakalo omkhulu owenzeke ngoMeyi odlule. Umonakalo uphoqe i-Apple ukuthi yakhe kabusha ngokuphelele ingxenye ebalulekile yesitolo sangaphambili esibizayo. Ngenyanga edlule, kususwe udonga oludumile lwaseGeorge Floyd oluzungeze isitolo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple Pioneer Place ePortland ivula izinyanga eziyi-9 kamuva
IMacBook Pro yokuqala eneprosesa le-M1 selivele lisesigabeni esivuselelwe